Dagaal beeleed ka qarxay deegaanka Deefow ee Hiiraan iyo xiisad taagan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal beeleed ka qarxay deegaanka Deefow ee Hiiraan iyo xiisad taagan
Mareeg.com: Dagaal beeleed ayaa saaka ka qarxay deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan, waxaana saaka halkaas weli ka jira xiisad colaadeed. Dagaalka saaka dhacay ayaan geysan khasaare weyn.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saaka salaadii subax ay deegaanka Deefow soo weerareen maleeshiyo beeleed iyaga kazoo horjeeda, ayna isaga soo baxeen tuulada, hase ahaatee ay qorsheynayaan iney dib ugu laabtaan.
“Saakaa salaadii subax ayaa xabad nagu bilaabatay, annaguna tuulada waan isaga baxnay qooladii kale ayaa heysata, dib ayaana ugu laaban doonaa” ayauu ninkaasi u sheegay mid ka mid ah Idaacadaha Muqdisho.
Qofkaan ka mid ah dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in arrinta Deefow tahay mid kusoo socon doonta qori caaradiis sida uu hadalka u dhigay, isagoo odayaasha labada dhinac ee dagaallamaya ku eedeeyey iney doonayaan iney wax cunaan oo kaliya.
Deegaanka Diifoow ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo xoogan oo maleeshiyo deegaanka ah oo kazoo kala jeed Dir iyo Xaawaadle.
Madaxweyne Xasan oo gudanaya waajibka Xajka
Sheeko qosol leh: Oday waayeel oo bakoorad la dhacay Raila Odinka